Budata AndroBooster APK maka Android
Free Budata maka Android (4.00 MB)
AndroBooster, dị ka ị nwere ike ịkọ naha ya, bụ otu nime ngwa ndị ị nwere ike iji mee ngwa ngwa ngwa gam akporo gị, nke na-ebelata oge. Ngwaọrụ Android gị anaghị efe efe, dịka ọ dị na ụbọchị mbụ nke ịzụrụ ihe; Ọ bụrụ na ị naghị eme nke ọma nịkpọ egwuregwu, ngwa ngwa a, nke ị nwere ike ibudata nefu, ga-abara gị uru nke ukwuu.
Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo ngwaọrụ nke na-adịghị arụ ọrụ nke ọma dị ka ụbọchị a zụrụ ya na ngwaọrụ gị gbanyere mkpọrọgwụ, m na-akwado ngwa a nke ukwuu. Otu mmetụ RAM na-ebutu, na-edebe cores CPU na-agba ọsọ na ugboro ikpeazụ, na-eme ka cores CPU na-agba ọsọ (dị ka ị maara, ọ bụrụgodị na ị nwere ekwentị isi 8, 8 nime ha anaghị arụ ọrụ notu oge) na ime ka ọrụ ndabere na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. , Ịgbanwe ọsọ CPU dị ka ojiji si dị, ojiji batrị Nanị ihe dị ala nke ngwa ahụ, nke nwere ikike dị elu dị ka ọgwụgwọ, bụ na ọ chọrọ mgbọrọgwụ.
Nha faịlụ: 4.00 MB
Mmepụta: Electroware Technologies
Kacha ọhụrụ na: 14-01-2022
Ọ bụrụ na afọ ejughi gị na ntọala nzuzo nke ngwa WhatsApp na -enye, ana m akwado gị ka ị lelee...
APKMirror bụ otu nime saịtị nbudata APK kachasị mma na ntụkwasị obi. Android APK bụ otu saịtị ị...
Ihe nbudata maka TikTok bụ otu ngwa ị nwere ike iji budata vidiyo TikTok na ekwentị gị. Ị nwere ike...
Site na ngwa nhicha WhatsApp, ị nwere ike ịtọhapụ ohere nchekwa site na ihicha vidiyo, foto na...
WhatsRemoved+ bụ otu nime ngwa gam akporo ị nwere ike iji gụọ ozi ehichapụ na WhatsApp. Nnukwu ngwa...
Site na ngwa ụlọ ahịa Huawei, ị nwere ike ịnweta ụlọ ahịa Huawei site na ngwaọrụ gam akporo gị....
Budata onye enyemaka Google (onye enyemaka Google) APK English wee nwee ngwa enyemaka kacha mma na...
Ngwa Android weghachite na -enye gị ohere ịgụ ozi ehichapụ na WhatsApp. Ngwa enyemaka efu, nke bara...
Ị nwere ike ihichapụ nchekwa nke ngwaọrụ gam akporo gị site na iji ngwa NoxCleaner. Ekwentị...
Site na ngwa My Cloud Home, ị nwere ike ịnweta ọdịnaya na ngwaọrụ My Cloud Home site na ngwaọrụ gam...
Samsung Max (Opera Max gara aga) bụ nchekwa data mkpanaka, VPN efu, njikwa nzuzo, ngwa njikwa ngwa...
Niji ngwa nbudata IGTV, ị nwere ike ibudata vidiyo kachasị amasị gị na Instagram TV na ngwaọrụ gam...
Pọdkastị Google bụ ngwa kachasị mma iji gee pọdkastị kachasị amasị gị, chọpụta English na pọdkastị...
Nlele bụ ngwa mmụba nke eziokwu Google (AR) nke na -enye anyị ohere iji ekwentị gam akporo dị ka...
Site na ngwa NoxBrowser, ị nwere ike nwee ihe nchọgharị ịntanetị ngwa ngwa na ntụkwasị obi na...
Huawei Backup bụ ngwa nkwado ndabere maka ekwentị Huawei. Software ndabere data ekwentị, nke...
Site na ngwa AirMirror, nke pụtara dị ka ngwa njikwa anya maka ngwaọrụ gam akporo, ị nwere ike...
Site na ngwa Sticker.ly, ị nwere ike chọpụta ọtụtụ nde akwụkwọ mmado WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo...
GoToMyPC bụ ngwa ime kọmpụta nke ekwentị gam akporo. Site na GoToMyPC, nke ndị mmepe nke LogMeIn...
CamToPlan bụ ngwa nha nke eziokwu dị na ndepụta nke ngwa gam akporo kachasị mma nke 2018. Site na...
Ihe nchọgharị Xiaomi Mint bụ ngwa ngwa, dị fechaa, echekwabara maka ndị na -eji ekwentị ekwentị gam...
Ị nwere ike ịmepụta ihe mmado WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo gị site na iji ngwa Sticker Maker....
Copyright right 2021, softmedal.com. Ikike niile echekwabara. Softmedal na-enye gị ohere ibudata free pc software, android ngwa na egwuregwu. Pụrụ ịchọta ndị kasị ewu ewu na android egwuregwu na a free download n'elu ikpo okwu! Mail: softmedal@gmail.com